Vaovao - Inona no tokony hataoko raha ny basy mandrehitra refueling irery dia tsy afaka mamefy?
Inona no tokony hataoko raha ny basy mandrehitra refueling tena irery tsy afaka ny hamehezana tena?
Na ny basy solika ao anaty kamion-tsolika dia afaka manisy tombo-kase tena miankina amin'ny hoe ny efitrano fandraisam-pefy afaka mamorona hantsana ampy. Noho izany, rehefa tsy azo fehezina ny basy refuel dia tokony hovahana arak'ireto hevitra manaraka ireto ny ankamaroany:
1. Hamarino raha azo antoka ny tombo-kase eo anelanelan'ny barika sy ny vatan'ny basy. Hamarino raha simba ny peratra O eo am-pitoerana. Raha simba dia azo soloina aorian'ny fanoloana.
2. Raha misy raharaham-bahiny eo amin'ny tampon'ilay valizy barika, esory ny barika ary esory ny loto ary avereno.
3. Zahao ny efitranon'ny banga raha misy fivoahana. Rehefa manarona ny banga, vaky ny diaphragm vava na tsy eo amin'ny toerany ny visy fanidiana, tsy azo foronina ny banga ary ny famehezana ny tenany.
4. Ny tahan'ny fikorianana kely dia tsy famehezana ny tenany: raha toa ka kely ny tahan'ny fikorianan'ny rano, ambany ny tahan'ny rano mikoriana, malemy ny fiantraikan'ny fantsohana rano, ny efitrano fandraisam-bahiny dia tsy hamokatra banga ampy, ary ny herin'ny lohataona ny lohataona dia tsy azo resena mba hametahana tombokase ny basy solika.
5 Raha azonao ny fitsipika miasa sy ny fampiasana ny basy solika solo-tena, azonao atao ny mifandray aminay, hanome valiny mahafa-po anao izahay.
Fotoana fandefasana: Sep-25-2019